Angel 2in1 Yangon Home | 24 Naryee
282000.00 Kyat Ks
မွေ့ရာတစ်ဘက်မျက်နှာပြင်တွင် ပိုးသတ်၍ပေါင်းခံထားသော အုန်းဆံနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အခြားမျက်နှာပြင်တွင် Polyurethane ရေမြှုပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စပရိန် မပါသောမွေ့ရာ......မွေ့ရာအမာကြိုက်သူများ ၊ ခါးနာတက်သူများ ၊ လူကြီးများအတွက် အထူးသင့်ျလျော်ပါသည်။
Sein and Mya
စာရင်းသွင်းပြီးသူ 62 ဖော်ပြချက်များ
211500.00 Kyat Ks
Angel (New Design) White Colour
၁. ဘိုဆန်ဆန် အဖြူရောင်ကြိုက်နှစ်သက်သော သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဖြူရောင်ချည်သားပိတ်စဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း။၂. ၁၁လက်မအထူ အမြင့်ရှိခြင်း။၃. တွန်းကန်အားကောင်းမွန်ပြီး ပုံမှန်စပရင်များထက် ၁ရစ်ပိုပြီး ၁လက်မပိုမြင့်သော စပရင်အသုံးပြုထားခြင်း။
65000.00 Kyat Ks
Size (L x W x H)ft 3'9" x 1'9" x 1'4"